Hadii Aad Lamaanahaaga si dhab ah u Jeceshahay iLaaLi 10-kaan Qodob? - iftineducation.com
Hadii Aad Lamaanahaaga si dhab ah u Jeceshahay iLaaLi 10-kaan Qodob?
aadan21 / February 29, 2012
iftineducation.com – Qoysaska soomaaliyeed inta badan waxey ku noolyihiin khilaafaad joogto ah oo soo kala dhex galo had iyo jeer, khilaafaadkaas ayaa ula ka qeybsamo labo, mid ku imaado kalgaceyl xadkiisii dhaafay, iyo mid ka imaado labada qof midkood oo dib u socod ah ama sedexeeye uu ka faaideystay.
Hadaba Shabakada www.kobciye.com iyo Allbanaadir.com Waxey halkaan idin kugu soo gudbinayaan dhowr qodob oo boorka looga jafayo had iyo jeer kalgaceylka ka dhaxeeyo lamaanaha si uusan khilaaf oo idil usoo kala dhex gelin, haddaba qodobadaan baro oo intaad isleedahay weey kaa caawinayaan xaaladaad hadda kusugantahay ka qaado.
Fadeexad iyo ceeyb weyn oo soo wajahday shirkadaha u dooda dadka iyo baabuurta ay shilalka wax ka soo gaaraan ee dalkaas Ingiriiska
Shirka London: Dhinacyada Siyaasadda Soomaalida oo Aragtiyo kala duwan ka bixinaya Shirkii London islamarkaan waxaa shirkaas lagu tilmaamey Mid Dowladda Ingiriiska ku dooneyso in ay la soo baxdo Shidaalka Soomaaliya